Waa maxay shuruudaha dhalashada Mareykanka? | USAHello | USAHello
aad diyaar u ah inay noqdaan muwaadin Maraykan ah tahay? First, hubi in aad xaq u leedahay inaad codsato. Baro oo ku saabsan shuruudaha aasaasiga ah ee dhalashada Maraykanka. Read faahfaahin ku saabsan shuruudaha isqaba iyo xubnaha qoyska.
shuruudaha dhalashada Mareykanka
Si aad u dalbato jinsiyadda, waa in aad guud ahaan la kulmaan tayuu shuruudaha soo socda:
Waa in aad ugu yaraan 18 sano jir ah.
Waayo, dadka intooda badan, waa in aad ku noolayd Maraykanka ugu yaraan shan sano oo degan. Si kastaba ha ahaatee, haddii seygaaga ama xaaskaaga waa muwaadin, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad dalbato saddex sano ka dib. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xaq u yeelashada isqaba.
Waxaad u baahan tahay inaad ku noolaa meel isku mid ah saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Waa inaadan ayaa safaro muhiim ah ka baxsan ee USA. Fasaxyada iyo safarada gaagaaban si aad u aragto qoys dibada jira okay, laakiin haddii aad horay u safarada dheer, waxaa laga yaabaa in fikrad fiican in aad la hadasho qareen ka hor inta codsanaya in ay hubiso in aad u qalanto. Waad awoodaa akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan joogitaanka jirka iyo shuruudaha joogto ah.
Waa in aad haysataa ma falal dembiyeed waaweyn. dembiyada Small, sida tigidh taraafiig, waa okay, laakiin idinku ma waxaa lagu xukumi karaa wixii dambiyo waaweyn. Mar walba daacad noqo oo arrintan ku saabsan sababta oo ah dambiyada yaryar inta badan waa okay, laakiin haddii aad jiifsato codsigaaga, this ka dhigi kartaa codsigaaga aad diiday. xitaa laga yaabaa in aad is tarxiilay. Haddii lagu xukumo denbi, waxaa aad u muhiim ah in aad la hadasho qareen. Waxay kuu sheegi doonaa wixii aad samayn.
Waa in aad wax ka barato oo ay bartaan oo ku saabsan dowladda Mareykanka, dhaqaalaha, iyo taariikhda si aad u gudbin kartaa imtixaanka Civics ah.
Waa in aad awoodaan inay akhriyaan, ku qor, hadalka iyo dhegaysiga af Ingiriisiga. Waxaa jira qaar ka mid ah marka laga reebo dadka naafada ah ama dadka ka weyn 50 kuwaas oo ku noolaa Maraykanka muddo dheer. Read about the exceptions for older and disabled people in Attachment D.
Dadka u adeegi jireen in ciidamada qalabka sida ee Maraykanka waxaa laga yaabaa xaq u leedahay inaad dalbato jinsiyadda. Baro badan oo ku saabsan qalmitaanka adeegga.
Macluumaadka rasmi ah ka helay Dawladda Maraykanka ayaa kuu sheegi doona haddii aad xaq u leedahay inaad dalbato jinsiyadda. Read online ama download dokumentigan si loo arko haddii aad xaq u leedahay.
Waxaa jira talaabooyin badan oo habka jinsiyada lagu qaato:
Buuxi oo u dir waraaqaha loo baahan yahay.
Buuxi baaritaanka asalka ah.
Buuxi wareysi uu siiyay Sarkaalka Maraykanka Citizenship and Immigration.
Qaado imtixaanka af gaaban Ingiriisi halkaas oo aad ka akhrisan iyo hadli xukun in English.
Qaado Imtixaanka Aqoonta Waddanka a on taariikhda Maraykanka iyo dawladda. On imtixaanka this, waa in aad ka jawaabto 6 ka mid ah 10 su'aalaha si sax ah oo ku saabsan Mareykanka Civics, Taariikhda iyo Dowladda.
Dhaarinayaa Daacad Noqoshada meesha aad ballan qaadayaa daacad u ahaanta USA.
Waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tallaabooyinka oo dhan marka aad diyaar u ah inay bartaan yihiin sida loo dalbato jinsiyadda.